Spotify wuxuu dib u qaabeynayaa codsigiisa macOS iyo Web | Waxaan ka socdaa mac
Spotify wuxuu dib u qaabeynayaa codsigiisa macOS
Tony Cortes | | Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac
Inteena ugu badan ayaa markii ugu horraysay ogaanay Spotify kumbuyuutarradeena. Awooddu waxay soo gashaa degelkeeda oo ay ku ogaataa guud ahaan muusikada iyadoo gujinaya jiirka ay ahayd mid naxdin leh, dabcan. Kadib codsiyada aaladaha moobaylka ayaa soo baxay taasna waxay ahayd markii uu hubaal ka dhigay boodboodka malaayiin macaamiil ah.
Hadda shirkaddu waxay leedahay kaliya cusboneysiin naqshadeynta websaydhkaaga, iyo barnaamijyada kombuyuutarkaaga, oo ay ku jiraan nooca loogu talagalay macOS. Dariiqo dib loogu cusbooneysiiyo bilowgooda, kuwaas oo horeyba dhowr sano u jiitamayay.
Kadib markii uu sii daayay cusbooneysiin cusub barnaamijka iOS, Spotify ayaa hadda dib u habeyn ku sameyneysa barnaamijyadeeda desktop, Mac iyo webka. Gelitaan lagu daabacay isaga blog rasmi ah, Spotify wuxuu ku dhawaaqayaa inay bilaabayaan "muuqaal cusub oo hagaagsan oo loogu talagalay desktop-ka iyo arjiga shabakada, iyadoo la waafajinayo khibrada isla markaana ka dhigaysa mid labadaba ka sahlan sidii hore."
Maaddaama waayo-aragnimada desktop-ka ay ahayd sida Spotify ay adduunka u ogaatay, waxay qaaddaa culeys badan shirkadda, waxayna qaadatay cusbooneysiinKadib bilo tijaabo iyo cilmi baaris ah, dhageyso jawaab celinta isticmaaleha oo aruuri jawaab celin togan iyo mid taban.
Iyadoo a shaashadda bilowga ah ee cusub, Spotify waxay fududeyneysaa marin u helka waxyaabaha ugu muhiimsan maktabadaada waxayna fududeyneysaa sameynta liiska cayaaraha iyadoo raadinta la dhisay. Muuqaal kale oo lagu soo bandhigay nooca desktop-keeda ayaa ah awooda jiidaya oo si toos ah loogu tuurayo raadadkaaga liiskaaga.
Spotify waxay dib u habeyn ku sameysay astaamaheeda ugu muhiimsan si ay saameyn muuqaal cusub ugu yeelato shaashadaha kumbiyuutarka waaweyn.
Buscar: Tabkan hadda waxaa laga heli karaa dhinaca bidix ee bogga badhanka.
Taariikhda isticmaaleha: Hadda waxaa ku jira fanaaniinta ugu fiican iyo kuwan raadkaygay.
menu: Dhageystayaashu hadda waxay bilaabi karaan fadhi idaacadeed oo loogu talagalay hees kasta ama raadiyaha farshaxanka si fudud iyaga oo gujinaya liiska.
Liisaska: Way fududahay inaad jaan-goyso liistadaada, adoo awood u leh inaad qorto sharraxaadyo, sawirro soo-rarto, jiido oo aad hoos u dhigto raadadka, isticmaal bar baar cusub oo la galiyay, tafatir safka iyo Aragtida Dhawaan la Ciyaaray, oo aad ku dabaqdo xulashooyin nooc cusub ah adoo adeegsanaya liiska cusub ee hoos-u-dhaca geeska midig ee kore.
Kaydi xawaaraha xawaaraha offline: Macaamiisha Premium waxay soo dejisan karaan muusigga ay jecel yihiin iyo boodhadhka loogu talagalay dib u ciyaarista dambe, xitaa qadka.
Khibradda dib loo naqshadeeyay ee desktop-ka 'Spotify desktop' iyo codsiyada websaydhka ayaa ka dhigaya astaamaha wax badan fududaan isticmaal. Isticmaalayaasha ayaa booqan kara bogga biraawsarka ee Spotify ama soo dejiso barnaamijka 'Mac' Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Spotify wuxuu dib u qaabeynayaa codsigiisa macOS
Apple Music waxay ka caawin kartaa carruurta dhibaatooyinka hadalka iyo dhawaqa
AirPods-ka cusub ee 3 wuxuu bilaabi doonaa wax soo saar inta lagu guda jiro rubuca saddexaad ee sanadka